Kuziva sei kana mutambo uchimhanya pane yangu PC, Emulator.online ▷ ▷
Ndinoziva sei kana mutambo uchimhanya paPC yangu? Iwe unogona kuwana zviri nyore nerubatsiro rwehunyanzvi maturusi senge webhusaiti Ndingamhanya nayo here?. Kana iwe usiri kuda kuti komputa yako iongororwe, unogona kuenda kune yechinyakare nzira yekuenzanisa zvakatemwa nemawoko.
Ona pazasi maitiro ekuona kana PC yako isina kusimba kana ichizoshanda mushe kumhanya mutambo.
Nekubatsira kweiyo yakasarudzika webhusaiti
Kune mamwe mawebhusaiti ane hunyanzvi mukuenzanisa zvakatemwa zvecomputer yako nezvidiki zvinodiwa zvinodiwa nemitambo mikuru pamusika. KANA Ndingamhanya nayo here? ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa, kugona kuongorora kumisikidzwa kwemuchina wako otomatiki.
1. Vhura bhurawuza yesarudzo yako uye enda kuNdingamhanyisa here?
2. Pane peji rekutanga, iwe uchaona yekutsvaga bhokisi raunoda kunyora zita remutambo, senge, Sims 4. Kana mutambo uripo mune iyo peji katarogu, ichaonekwa mune iyo runyorwa. Dzvanya pazita rinoita kunge rinodzivirira kukanganisa kwekutsvaga.
3. Wobva wadzvanya pane bhatani Unogona kuimhanya kuita tsvakiridzo;
4. Pa peji rinotevera, zvidiki uye zvakakosha zvinodiwa kumhanya mutambo zvinoratidzwa. Kuti PC yako iongororwe, zvinodikanwa kurodha pasi faira inobvumidza webhusaiti kuti ione matekinoroji emuchina wako. Kuti uite izvi, tinya bhatani Unogona kuimhanya kurodha kunyorera kubva pawebhusaiti;
5. Vhura iyo inogoneka faira uye chengeta iyo peji rewebhu kuvhura. Chirongwa chinobva chatotanga kuongorora muchina wako;
Zvichienderana nebrowser, chirongwa ichi chinoratidzwa pasi pechidzitiro kana kurodha kwapera. Ichave zvakare kuwanikwa mune yekurodha runyorwa rwe browser uyezve mune yekuenda folda.
6. Nguva yekuziva inogona kusiyana kubva pamasekonzi mashoma kusvika pamaminetsi uye mhedzisiro yacho inozoratidzwa pane peji rewebhusaiti rawakaramba wakashama. Inokuudza kana muchina wako uine zvishoma zvinodikanwa zvinodiwa uyezve zvinokurudzirwa kuitira kuti mutambo ushande pasina matambudziko.
Dzimwe nzvimbo kuti uone kana mutambo unomhanya paPC
PCGameBenchmark inobvumidza iwe kuisa manyore PC yako kurodha pasi kana kurodha pasi software inoongorora otomatiki maratidziro emuchina. Wobva wangotsvaga zita remutambo.
Kunyangwe paine hunyanzvi mumazita eEE, Game Dheti ine sarudzo kubva kune vamwe vanogadzira. Kunge chishandiso chakapfuura, icho chinokutendera iwe kuti uise manyore kupinda data kana kurodha pasi kunyorera kunotora ruzivo nezve PC pakarepo. Saka, chingotsvaga mutambo waunoda.
Imwe nzira yekuziva kana mutambo uchizoshanda kana kuti kwete paPC yako ndeyokuenzanisa manyorerwo ehunyanzvi marongero ePC nezvinodiwa zvishoma nemutambo. Mhinduro yacho inogona kutora nguva yakati rebei kupfuura kuburikidza nemawebhusaiti, asi zvakare zvakareruka kuita.
Maitiro ekuziva iyo PC maratidziro
Iwe unogona kuwana iyo yehunyanzvi yakatemwa yekombuta yako munzira dzinoverengeka. Chakareruka zvacho ndechekunyora iyo temu Msinfo32.exe muWindows search box. Zvichienderana neshanduro yeiyo system, yekushandisa yekutsvaga inowanikwa mune yekushandisa kana muKutanga menyu (nekudzvanya paWindows icon).
Mumhedzisiro yekutsvaga, tinya Msinfo32.exe kuvhura. Kana usingakwanise, ungangoda Mhanya semutongi. Kuti uone sarudzo, tinya kurudyi pamhedzisiro.
Muwindo System Ruzivo, kuruboshwe bar, tinya Pfupiso yeSystem. Unogona kuona ruzivo nezve iyo uchishandisa system (1), processor (2) mi ndangariro (3).
Kuti utarise kuchengetedza, tinya Self Storage uyezve mukati Units.
Zvisinei, kuti uwane yako yemakadhi kadhi modhi, tinya Components uyezve mukati Kufumurwa. Kana komputa yako iine kadhi rakazvitsaurira uye kadhi rakavakirwa-mukati, data pamhando dzese rinoratidzwa.
Wedu mutungamiri Wona marongero ePc inotsanangura maitiro ekutarisa iwo maficha zvakadzama pane akasiyana mavhezheni eWindows. Bvunza kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve iyi nyaya.
Kana iwe uchida kumhanyisa maitiro, unogona kushandisa chirongwa ichi Muenzanisokubudikidza CCleaner. Iyo yemahara vhezheni inogona kuongorora iyo Hardware uye nekupa iyo inodiwa ruzivo kuti uone kana mutambo uchienderana nemuchina wako.
Ingo tora, isa uye tinya bhatani Mhanya Kutaura. Mukati memasekondi, data pamusoro pechigadzirwa inoratidzwa, sezvakaratidzwa pasi apa. Uye zvakare, iyo tembiricha yeCUU uye vhidhiyo kadhi inonziwo.
Kufananidza nezvidiki zvemitambo zvinodiwa
Paunenge uchinge uine maratidziro ehunyanzvi ekombuta yako muruoko, ingo tarisa zvidiki zvidiki zvinodiwa kuti mutambo umhanye pamushini. Ruzivo urwu runowanzo kuwanikwa pane mawebhusaiti evashandisi uye pamapuratifomu anovagamuchira.
Pane Steam, semuenzaniso, iwo ruzivo runogona kuwanikwa pasi pechikamu Nezve mutambo uyu. En System zvinoda, ndiwo mashoma uye akakurudzirwa zvinodiwa kuti ushandise mutambo paPC.
Panyaya yeFifa 21, mhedzisiro inotevera inoratidzwa:
Imwe nzira ndeye kushandisa masayiti anosangana nezvinodiwa zvidiki zvemitambo mikuru munzvimbo imwechete. Ingo tsvaga nemazita kuti uwane zvaunoda.
Ndingaite Sei Kuti Ndimhanye, PCGameBenchmark uye Game Dheti kupa iyi data. Kunze kwavo, kune zvekare Game System Zvinodiwa peji.
Minimum zvinodiwa x Zvinokurudzirwa zvinodiwa
Izvo zvidiki zvinodiwa zvinoratidza iyo Hardware inokwanisa kumhanya mutambo. Nekudaro, ichaita zvirinani, senge inotsvedza uye zvirinani mifananidzo, kana PC iine zvinokurudzirwa zvirevo.
Iyo yekushandisa sisitimu uye inodiwa dhisiki nzvimbo haisiyane pakati pezvishoma uye zvinokurudzirwa zvinodiwa. Iyo RAM, processor uye iyo giraidhi kadhi ndizvo zvinhu zvinogona kusiyana zvakanyanya kubva kune mumwe kuenda kune mumwe.
Iwo akanakisa uye akareruka emulator emumhanzi kutamba paPC isina kusimba
Screen yekurekodha sarudzo dzePC isina kusimba
Maitiro ekubatanidza foni yako kune isiri-smart TV munzira shanu dzakasiyana